Qaanso roobeed moonstone macnaha iyo bogsiinta guryaha - video
Tags Moonstone, qaansoroobaad, qaansoroobaad; moonstone
Qaanso roobeed moonstone macnaha iyo bogsiinta guryaha. Qiimaha moonstone buluug ah.
Ka iibso moonstone qaanso roobaadka dabiiciga ah dukaankeenna
Dayax madoobaadka moonstone vs moonstone
Moonstone waa orthoclase feldspar. Waxay leedahay ka kooban kiimikada KAlSi3O8 (potassium, aluminium, silikoon, oksijiin). Moonstone waxaa laga heli karaa midabyo kala duwan oo ay ku jiraan caddaan, kareem, cawl, lacag, miro guduud, madow. In kasta oo ay muujinayaan adularescence, maahan iftiin midab leh sida aad ku heli laheyd moonstone.
Rainbow moonstone waa plagioclase feldspar. Waxay leedahay ka kooban kiimikada (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (sodium, calcium, aluminium, silicon, oxygen). Kani waa isla kiimikada ka kooban labradorite. In kasta oo magaca moonstone, runti waa labradorite cad. Taasi waa sababta dhagaxan uu u leeyahay astaamo labradorescence in aan ka helno labradorite. Waxay had iyo jeer ku jirtaa ka mid noqoshada tourmaline madow.
Sida dhagxaanta kale ee feldspar sida amazonite iyo labradorite, waxay xasaasi u tahay kiimikooyinka, abrasives, kul, acids iyo ammonia. Weligaa ha u isticmaalin uumiyaha, biyaha kulul ama nadiifiyeyaasha Xiinka dhagaxan. Isticmaal saabuun khafiif ah iyo biyaha tuubada heerkulka qolka marada jilicsan si aad u haysatid dhalaalka dhagaxa.
Lacag dhigahu waxay ku yaalliin Kanada, Australia, India, Madagascar, Mexico, Myanmar, Russia, Sri Lanka iyo USA.
Qaanso roobeed moonstone macnaha iyo bogsiinta guryaha
Dhagaxa qaaliga ah waxaa loo maleynayaa inuu keenayo isku dheelitirnaan, wada noolaansho iyo rajo iyadoo xoojineysa hal-abuurka, naxariista, adkeysiga iyo kalsoonida gudaha. Waxaa la rumeysan yahay inay gacan ka geysaneyso xoojinta garashada iyo garashada maskaxda, gaar ahaan inay noo siiso aragtiyo waxyaabo aan isla markiiba muuqan. Sababtoo ah waxay naga caawineysaa inaan iska ilaalino aragtida tunnelka, waxaan awoodnaa inaan aragno fursado kale. Waxay u eg tahay iftiin waxyoon oo yimaada markaan furan nahay oo xasilloon nahay. Markaan xirno dhagaxan, dhiirrigelinta nolosha beddeleysa ayaa dhici karta marar badan.
Muxuu u fiicanyahay moonstone moonstone?
Dhagaxa waxaa loo maleynayaa inuu keenayo isku dheelitirnaan, is afgarad iyo rajo iyadoo kor u qaadeysa hal-abuurka, naxariista, adkeysiga iyo kalsoonida gudaha. Waxaa la rumeysan yahay inay gacan ka geysaneyso xoojinta garashada iyo garashada maskaxda, gaar ahaan inay noo siiso aragtiyo waxyaabo aan isla markiiba muuqan.
Sidee ayaad u daryeeshaa moonstone qaanso roobaadka?
Sida dhagxaanta badankood, moonstones waa jilicsan yihiin waana in si taxaddar leh loola dhaqmaa. Si aad u nadiifiso, si fudud ugu isticmaal biyo diirran saabuun fudud si aad u nadiifiso. Xitaa waad isticmaali kartaa burush jilicsan oo jilicsan haddii loo baahdo. Kadib, si fudud ugu qalaji maro jilicsan
Fartahee ayaad ku xirtaa giraanta moonstone giraanta qaansoroobaad?
Si aad uga hesho faa iidooyinka ugu badan dhagaxan, ku xidhashada giraanta lacagta qalinka ah ayaa ah habka ugu fiican. Xitaa xiddigiska ayaa ku talinaya in moonstone uu sida ugu fiican ugu xirmo farta yar ee gacanta midig.
Sidee ku ogaan kartaa haddii moonstone qaanso roobaad uu dhab yahay?
Dhagaxa waxaa lagu aqoonsan karaa adularescencekiisa astaamaha, kaas oo u muuqda isha isha ee gudaha ama sheen. Waxaa lagu kala sooci karaa moonstone-ka orthoclase iyada oo loo eegayo isbeddelkeeda sarreeya iyo culeyska gaarka ah ee sarreeya.
Ma qaanso roobaad moonstone dabiici ah?
Haa waa labradorite aan midab lahayn, macdanta feldspar ee sida dhow ula xidhiidha sheen oo leh midabbo noocyo kala duwan ah. In kasta oo aysan farsamo ahaan ahayn moonstone, haddana waxay la mid tahay in ganacsigu u aqbalay inuu yahay jawharad ku habboon.
Sidee adag yahay qaanso roobaadka moonstone?
Waxay leedahay adkaansho 6 ilaa 6.5, taas oo u muuqan karta xoogaa jilicsan marka la barbar dhigo dhagaxyada qaaliga ah, laakiin way adag tahay in la xidho.
Waa maxay qiimaha moonstone buluug qaansoroobaad?
Waxyaabaha tarjumaadda leh, mid cad ama midab jidh leh oo raalli ka ah iyo adularescence, ayaa si caddaalad ah ugu badan suuqyada waxayna amar ku bixiyaan qiimo aad u yar.
Ka iibso moonstone qaanso roobaadka dabiiciga ah dukaankeenna qaaliga ah
Dayax indhaha bisad
Tags isha Cat ee, Moonstone
Dhagxaan cusub ayaa la heli karaa
Dhagaxyo cusub oo laga heli karo dukaankeenna